विश्वकै ठुलो शिला पवित्र शालिग्राम जुन नेपालमै छ, सेयर गरेर दर्शन गरौं ! – aajnepal
HomeRochakविश्वकै ठुलो शिला पवित्र शालिग्राम जुन नेपालमै छ, सेयर गरेर दर्शन गरौं !
शिला शालिग्राम, एक प्रसिद्ध नाम । नामले नै यसको महत्व र पहिचान झल्काउने सामथ्र्य राख्न सक्दछ । भौतिक रूपमा हेर्दा यो एक ढुंगा मात्र हो, त्यो पनि विश्वकै ठूलो । तर, यो ढुंगो हेर्न प्रत्येक दिन सयौं मान्छे जान्छन् ।
यो ढुंगोलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान् विष्णुको अवतारको रूपमा पुज्ने गर्दछन् । स्वस्थानी कथामा जालन्धरकी श्रीमती वृन्दाको पतिव्रता छद्म भेषमा भगवान् विष्णुले नष्ट गरेपछि वृन्दाले उनलाई चार श्राप दिएकी थिइन् ।
ती चार श्रापमध्येको एक पत्थर बन्नुपरोस् भन्ने श्रापका कारण भगवान् विष्णुले शिला शालिग्रामको रूप लिएको किंवदन्ती सुन्न पाइन्छ । यो, त शिला शालिग्रामको एक धार्मिक पहिचान मात्र हो । मानवीय संवेदनाका कुनै पनि क्षणमा मानिसहरूले सम्झने आस्थाको केन्द्रको रूपमा पनि शिला शालिग्रामलाई लिने गरिन्छ ।
मुक्तिनाथ र गलेश्वरपछि कालीगण्डकीले छुने अर्को प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल पनि शालिग्राम नै हो ।शिलालाई दाहिने पारेर बग्ने कालीगण्डकी नदीले पनि शिला शालिग्रामको महत्व अझै बढाएको छ ।
हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको प्राय सबै संस्कारहरूको शिला शालिग्राममा नै पूजाआजा गरी गर्ने गरिएको छ । यो चलनको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने यकिन तथ्य भने छैन ।
यो त भयो जिल्लागत, धार्मिक तथा भौगोलिक वस्तुस्थिति। तीन जिल्ला, दुई प्रदेशले आफ्नो गौरवको रूपमा शिला शालिग्रामलाई देखाएतापनि यी सबै प्रदेश र जिल्लाकै तानातानको कारण शिला शालिग्राम अहिले बेवास्तामा परेको छ ।
आज प्रत्यक्ष सीमानामा जोडिने स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र पर्वतको विहादी गाउँपालिका यी दुवैले शिला शालिग्रामलाई आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गरिरहँदा शिलाको भौतिक अवस्था भने कुरूप बन्दै गइरहेको छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आइसकेपछि भने बिहादी गाउँपालिकाले अघिल्लो बजेटमा पनि यसलाई समावेश गर्न सकेन, स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको नजरमा यो पर्न सकेन । तर, स्थानीय तहको बजेटले यसको संरक्षण गर्न सम्भव भने छैन ।
विहादी गाउँपालिकाले शालिग्रामको संरक्षणका लागि तटबन्ध तथा संस्कृति जोगाउन पौवाहरू बनाउने योजना बनाएको छ ।तर, ठूलै योजना बनाएर यसको संरक्षण गर्ने उपाय भने स्थानीय तहको वशमा छैन
दुई वर्षअघि साउन १२ गते कालीगण्डकी नदीमा पानीको सतह बढ्दा शिलालाई नै कैयौं दिनसम्म डुबाएको थियो । त्यतिबेला नै शिलाको परिक्रमास्थल भत्किएको हो ।
त्यो अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन् । वर्षैंपिच्छे आउने बाढीका कारण त्यहाँका स्थानीयहरू वर्षातको समयमा सधंै त्रासमा रहने गर्दछन् । यसकोदिगो समाधानका लागि पनि स्थानीय तहहरूले योजना बनाउन सकेका छैनन् ।
गतवर्षको स्थानीय तहको चुनावमा लोकप्रिय नारा बनेको शिला शालिग्राम चुनावपछि हराएको छ । त्यहाँ केवल हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान् व्यक्तिहरू दर्शन गर्न जाने हुँदा मात्र चहलपहल देखिन्छ ।
शिला शालिग्राममा ठूलीएकादशी र वैशाखे संक्रान्तिका कारण वर्षमा दुईपटक दर्शनार्थीको भेला हुने गरेको छ । हरेक वर्षका दुई धार्मिक तिथिमा शालिग्राममा लाग्ने बृहत् मेला तथा दर्शनार्थीहरूले अहिलेसम्म यसको सांस्कृतिक महŒव भने कमजोर हुन दिएका छैनन् ।
एक आस्था र धर्मकै कारण हालसम्म समयसमयमा चर्चामा आउने शालिग्रामको भौतिक स्वरूप परिवर्तन हुँदै गर्दा यो सम्बन्धित निकायको बेवास्तामा पर्दै गइरहेको छ ।
पछिल्लो समय कालीगण्डकी लोकमार्गको निर्माणकार्यले पनि यसको अस्तित्व संकटमा पर्दै गइरहेको छ । लोकमार्गका लागि सेतीखोलामाथि मोटरेबल पुल निर्माण गर्दै शिला परिसरबाट नै अवैध रूपमा बालुवा र कंक्रिटहरू झिकिएका छन् । शिलालाई घुम्ने सेतीखोलाको बीचमा नै ट्याक्टर र डोजरहरू चलाइँदा यसको भित्री सतहमा असर पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ खोलालाई गहिर्याउँदै जाँदा वर्षात्मा यसले बाढी–पहिरोका कारण मानवीय घटना पनि घटाउन सक्ने जोखिम बढिरहेको छ ।